बिरालोहरु - अन्त गर्न मानिसले पालन कहिल्यै गरेका सबै भन्दा रहस्यमय जनावरहरूको एक। एक बिरालो को छवि सधैं रहस्य र शान को areolas enveloped।
Siamese बिरालोहरु सबैभन्दा पुरानो र सबै भन्दा प्रसिद्ध नस्ल यी पशुहरू मध्ये एक हो। तिनीहरूले मुख्य रूप किनभने असामान्य रंग र धेरै अनुकूल चरित्र यसको लोकप्रियता प्राप्त गरियो। हाल, तिनीहरू सबै महादेशमा मा पाउन सकिन्छ।
को Siamese बिरालोहरु सियाम (अब थाईल्याण्ड) को शाही अदालत बढ्न थालेपछि यी बिरालोहरु को पहिलो उल्लेख, को सोह्रौं शताब्दीमा देखा छन्। देर उन्नाइसौँ शताब्दीमा, पहिलो यूरोप अन्य जात तिनीहरूलाई पार, पुरानो महादेश यी जनावरहरू ल्याउन थाले।
मूल नस्ल Siamese बिरालोहरु यो नस्ल को अब अवस्थित प्रतिनिधिहरु धेरै समान थिएनन्, तर पछि मानव हस्तक्षेप अन्ततः आधुनिक मानक सिर्जना गरिएको थियो छ।
को Siamese नस्ल को प्रतिनिधिहरु को मुख्य विशेषता।
Siamese शरीर यसको परिवारका थुप्रै अन्य प्रजाति समान संरचना। तिनीहरूले पशु निकास छ कि छाप सिर्जना जो धेरै पातलो र लम्बी torsos र limbs, द्वारा विशेषता छन्।
संरचना को दृश्य को बिन्दुबाट हुनत, Siamese बिरालोहरु कुनै अरु, तिनीहरूले धेरै विशिष्ट र अद्वितीय रंग छ केवल ऊन, भनिन्छ KOLOR बिन्दु वा बिन्दु (गाढा स्थलहरू) बाट भिन्न छन्।
Siamese बिरालो - ध्यान केन्द्र हुन प्रेम गर्ने धेरै सामाजिक जनावर। यो यसको मालिक जनावर एउटा धेरै अनुकूल र वफादार छ। र नस्ल बारेमा एक साधारण misconception - कहिलेकाहीं यो सम्बन्ध बिरालो जो अन्य परिवार सदस्य, अक्सर rancor रूपमा मानिन्छ जो आक्रमण को चरम अवस्थामा हुन सक्छन्, धेरै डाह हुन्छ भनेर बलियो छ बिरालो परिवारको।
एकै समयमा, यो जो भर्खरै आइपुगेको शरण खोज्नेहरूको सूक्ष्म मन र विश्वास देखाउन धेरै उत्सुक जनावर छ।
कसरी Siamese बिरालोहरु हेरचाह गर्न
Siamese बिरालोहरु, सबै भन्दा जातिहरु जस्तै, यो प्रकार धेरै सजिलो छ, र तिनीहरूले विशेष हेरविचार आवश्यक छैन। संग नियमित दैनिक हेरविचार र जनावरहरूको बाल गुणस्तर सुधार छ, बिरालोहरु थप स्वस्थ हुन्छन्।
साथै, पोषण को मामला मा, Siamese बिरालोहरु विशेष र विशेष केहि खुवाउन आवश्यक छैन। यो खाना राम्ररी सन्तुलित र वैविध्यपूर्ण थियो महत्त्वपूर्ण छ। लागि ड्राई फिड को एक पारंपरिक खाना ताजा मासु को समय टुक्रा समय देखि बैकल्पिक, साथै रुचाउने अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्नेछ siamese बिल्ली को बच्चा विकास र वृद्धि पोषक लागि आवश्यक सबै प्राप्त गर्दछ। यो पनि यस नस्ल को प्रतिनिधिहरु धेरै चाँडै छोटो समयमा वजन बढाउनका र त्यहाँ पशु कडा potolsteet छ कि एक संभावना छ, किनभने फिड को आपूर्ति को मात्रा नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। Siamese बिरालोहरु, दुर्भाग्यवश, मात्र केही वर्ष मा देखा पर्न सक्छन् आनुवंशिक कमजोरीहरू एक नम्बर छ। Siamese बिरालोहरु को एक धेरै साधारण रोग - को इन्ट्रोपीबाइट छ आँखा, तेस्रो शताब्दीको हानि, पुल विरूपण (तथाकथित भ्यागुतो सिंड्रोम), वा हिप dysplasia।
विशेष मा, रोग को यस प्रकारको नस्ल जो बिरालोहरु र crossbred अनुभवहीन मानिसहरू को मामला मा निर्धारण गरिन्छ। रोग को slightest साइन मा रोग उपचार छ भने, यो जनावर को सामान्य कामकाज मा ठूलो कठिनाइ हुन सक्छ किनकी, डाक्टर जान आवश्यक छ। साथै, लगातार दुखाइ सबै समय बिरालो धेरै भयातुर र पिन्चे, र यो, बारी मा, पक्कै पनि परिवार यसको सम्बन्ध असर हुनेछ भन्ने तथ्यलाई गर्न सक्छ। को Siamese बिरालो को सामान्य हेरविचार सुनिश्चित, कुनै पनि अन्य जनावर जस्तै, उनको प्रत्यक्ष अब मदत र छोराछोरीलाई प्रसन्न हुनेछ।
बौना बिरालो: दृश्यहरु र वर्णन। घरेलु साना बिरालो (फोटो)
Speckled Catfish: सामग्री र सुविधाहरू विवरण
बिरालो मूत्र उत्पादन को गन्ध? राम्रो सल्लाह
छाँटिँदै - यो trimming ... जाइन्ट Schnauzer। फक्स टेरियर trimming
इन्जिन निदान र यसको बारेमा सबै
Umbilical हर्निया - वर्णन, लक्षण, उपचार बच्चाहरु र वयस्क मा
व्हीलचेयर "Verdi" - सान्त्वना र मूल डिजाइन
Maieutics - यो ... दर्शन मा maieutics
प्रलोभन - यो के हो? प्रलोभन र seducer
HTC अनुभूति XE: डिजाइन सुविधाहरू, समीक्षा र फोटो